(၇)ကြိမ်မြောက် UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ် | cincds
(၇)ကြိမ်မြောက် UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်
နေပြည်တော် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖွင့်လှစ်သော ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သင်တန်း UN Peacekeeping Operation Course ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Saurabh Kumar နှင့် စစ်သံမှူး Col. Ketan Arun Mohite၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ သင်တန်းသားအရာရှိများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar တို့က အဖွင့်အမှာစကား အသီးသီးပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နည်းပြအရာရှိတစ်ဦးက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ UN Peacekeeping Operation တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများ၊ (CUNPK)မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် အတူအမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းမှာ (၇)ကြိမ်မြောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ အရာရှိ ၉၆ ဦး၊ စစ်သည် ၈၄ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုသင်တန်း၌ အရာရှိ ၃၀ ဦး တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီးသင်တန်း၌ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းများ၏ သမိုင်းကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ထိန်း လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ အရပ်သားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကင်းလှည့်ခြင်း၊ ယာဉ်တန်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ခွဲအခြေချစခန်းတည်ဆောက်ခြင်း ၊ လေ့ကျင့်ခန်း BlueHelmet စသည့် ဘာသာရပ် များအား စာတွေ့၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၇)ကြိမ်မြောက်ွ့ ဏနခနေုနနစငညါ ဥစနမအငေသည ဃသကမနြ ဆိုင်ရာသင်တန်းဖငွ့်လှစ်
နပြေည်တော် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၃
မြန်မာ့တပ်မတ်မှော အရာရှိ၊ စစ်သည်များအနဖြေင့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သိရှိနိုင်စရေန်အတကွ် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အိန္ဒိယတပ်မတ်တေိာု့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရက်ဖွငွ့်လှစ်သော ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သင်တန်ွး့ ဏနခနေုနနစငညါ ဥစနမအငေသည ဃသကမနြ ဖငွ့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနနေံ့နက်ပိုင်းတငွ် နပြေည်တ်ရှောိ ဏမေုြှသပေူ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါဖငွ့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတ်ကောာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ် ကာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတ်အောရာရှိကြီးများ၊ နပြေည်တ်တေိာုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးံ.န.မွ.ှကမေဘေု့ကာမေ နှင့် စစ်သံမှူး ဃသူ.ုနအညေ ဗမကည သွ့ငအန၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် ဃနညအမနျသမ့ ညငအနွိအငေသညြ ဏနခနေုနနစငညါ (ဃ့ဏွု) မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ မြန်မာ့တပ်မတ်မှော သင်တန်းသားအရာရှိများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတ်ကောာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ် ကာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးံ.န. မွ.ှကမေဘေု့ကာမေ တို့က အဖငွ့်အမှာစကား အသီးသီးပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဃနညအမနျသမ့ ညငအနွိအငေသညြ ဏနခနေုနနစငညါ (ဃ့ဏွု) မှ နည်းပြအရာရှိတစ်ဦးက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ွ့ ဏနခနေုနနစငညါ ဥစနမအငေသည တငွ် ပါဝင်ဆောင်ရက်နွမှေု အခြေအနမျေားအား ဏသတနမ ဏသငညအ ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပသြည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတ်ကောာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ် ကာကယ်ရွေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖငွ့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများ၊ (ဃ့ဏွု)မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ သင်တန်းသားများနှင့် အတူအမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းမှာ (၇)ကြိမ်မြောက်ဖငွ့်လှစ်ခငြ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ အရာရှိ ၉၆ ဦး၊ စစ်သည် ၈၄ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုသင်တန်း၌ အရာရှိ ၃၀ ဦး တက်ရောက်ကြမည်ဖစြေ်ကြာင်း သိရှိရပြီးသင်တန်း၌ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းများ၏ သမိုင်းကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ဆောင်ရက်နွမှေုများ၊ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ထိန်း လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ အရပ်သားများအား ကာကယ်စွောင့်ရှောက်မှု၊ ကလေးသူငယ် ကာကယ်စွောင့်ရှောက်မှု၊ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရက်မွှု၊ ကင်းလှညြ့်ခင်း၊ ယာဉ်တန်းလုံခြုံရေး ဆောင်ရက်ခြွင်း၊ တပ်ခွဲအခြေချစခန်းတည်ဆောက်ခငြ်း ၊ လကျေ့င့်ခန်ွးူကနံနာူနအ စသည့် ဘာသာရပ် များအား စာတွေ့၊ လက်တွေ့ လကျေ့င့်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖစ်ြပြီး အောက်တိုဘာ ၄ ရက်အထိ ဖငွ့်လှစ်သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ေကြာင်း သတင်းရရှိသည်။ွူကနံနာူနအ